Author Topic: Busbus (Chicken Pox) (Read 24309 times)
« on: March 18, 2008, 06:58:43 PM »
Waa maxay Busbus?
Busbusku waa infakshan guud oo uu dhaliyo fayraska loo yaqaano (Varicella Zoster). Ilmaha waxaa hayn karta qandho maalin ama laba, dabadeedna waxaa guduuta maqaarka waxaana ka dambeeya kuuskuusya yaryar oo guduudan kuwaas oo laba ilaa afar berri ka dib noqda meel biyagaleen. Meelahaas nabarada noqday way cadaadaan waxaana gasha malax dhowr maalmood ka dibna waxaa fuusha qolof madow.
Waa wax caadi ah in dhibcaha lagu arko qaybta dhexe ee jirka, madaxa iyo surka wuxuuse ku yar yahay gacmaha iyo lugaha. Tirada dhibcuhu way kala duwan yihiin.
Carruurta jirta 2-10 sano ayuu badanaa ku dhacaa. Xumada iyo furuurucu way ku muuqdaan laba asbuuc ka dib markaad la kulanto qofka qaba.
Busbuska waa la kala qaadaa laga bilaabo maalinta 2aad ilaa intaan furuurucu muuqan ilaa 5 berri marka ugu horraysa oo uu so muuqday.
Qolfahaa qalalaa cudurka ma fidiyaan, wuxuuna cudurku bixiyaa difaac adag oo keena badanaa in cudurku qofka aanu mar labaad ku dhicin.
Si looga fogaado in aan cid kale loo gudbin, carruurta waa in aan loo dirin dugsiga iyo iskuulka ilaa dhibcaha maqaarka oo dhami qolof noqdaan. In kastoo aanay qayb ka ahayn barnaamijka talaalka caadiga ah, waa la helli karaa talaalka busbuska. Kuwaan waxaa laga bixiyaa hal qadar waxaana la siiyaa carruurta jirta 12 bilood.
Carruurta busbuska qabta badankeed uma baahna daaweyn khaasa oo wax lagaga qabto fayraska. Daaweynta waxaa loo adeegsadaa in lagu xakameeyo xumada iyo in looga hortago in dhibcaha maqaarku keenaan cudur kale.
Haddii infakshanka bakteeriyadu dhaco, wuxuu keeni karaa haar nabardu ka tagaan. Waxaa caawimi kara daawada lagu daweeyo bakteeriyada iyo waxyaalla isxoqa ama cuncunka yareeya. Lidka nabarka ayaa laga yaabaa in loo isticmaalo dhibcaha maqaarka si looga hortago wax isaga ka yimaada.
# Busbusku waa infakshan ka yimi fayras leh xumad iyo dhibca ama goobaha jirku yeesho
# Dhibcaha ama goobaha maqaarka badanaa waxaa lagu arkaa jirka qaybihiisa dhexe, madaxa iyo surka
# Ilmuhu wuxuu infakshanka qabaa qiyaas ahaan 7 maalmood, laba maalmood ka hor ilaa 5 berri marka furuurucu muuqdo ka dib
# Carruurtu waxay u baahan yihiin in guriga lagu hayo oo aan dugsiga loo dirin, ilaa dhibcaha maqaarka oo dhami ay qolofa fuullaan
# Qolofta qalalani infakshanka ma gudbiso
# Daawayn ayaa la adeegsadaa si loo caawimo calaamadaha ama looga hortago infakshanka bakteeriya kale oo ka dhalata dhibcaha
Wixii su'aalo ah aad qabtid ku soo gudbi qeybta su'aalaha.
Ready Reference Of CHICKEN POX (Varicella)
Views: 3218 March 07, 2012, 06:02:26 PM
£1,000 To Treat One-legged chicken!!!
Views: 3281 June 16, 2008, 01:45:22 PM